Nosafidian’ny BBC ho iray amin’ireo vehivavy 100 nanana herim-panintonana indrindra ilay vehivavy Thailandey moanina Theravada · Global Voices teny Malagasy
Nosafidian'ny BBC ho iray amin'ireo vehivavy 100 nanana herim-panintonana indrindra ilay vehivavy Thailandey moanina Theravada
Voadika ny 23 Oktobra 2019 17:14 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, русский, bahasa Indonesia, Esperanto , English
Dhammananda Bhikkhuni (Sary: thaibhikkuni.com)
Nalaina tao amin'ny Prachatai ity lahatsoratra ity, tranonkalam-baovao tsy miankina any Thailandy, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty .
Dhammananda Bhikkhuni, ilay vehivavy Thailandey voalohany notendrena ho moanina Theravada sady renin'ny Monastera Songdhammakalyani ankehitriny dia notendrena ho iray amin'ireo Vehivavy nosafidian'ny BBC miisa 100 ho vehivavin'ny taona 2019.
Raha manana moanina Bodista miisa 300.000 eo ho eo i Thailandy dia mbola voarara amin'ny fanokanana azy ny ankamaroan'ny vehivavy ao amin'ny tany Thailandey. Tamin'ny taona 1928, taorian'ny fikasana hanokanana ny vehivavy roa, namoaka didim-panjakana mandrara ny vehivavy tsy hanao moanina na moanina vaovao ny Printsy Bhujong Jombunud Sirivaḍḍhano, ilay Patriarka Tampony any Thailandy. Namoaka didy roa ihany koa ny Filankevitra Ambony Sangha tany Thailandy tamin'ny taona 1984 sy 1987 mandrara ny fanokanana ireo vehivavy. Tsy mandrara ny fanokanana ireo vehivavy anefa na izany aza ny Lalàna Sangha tamin'ny taona 1962, lalàna laika mifehy ny monasitera Thailandey sy ny fanitsiana ny lalàna tamin'ny taona 1992 ihany koa.
Ankoatra izany, namoaka didy tamin'ny taona 2015 ny Vaomieram-pirenena miaro ny Zon'Olombelona ao Thailandy (NHRC) fa manitsakitsaka ny Fifanarahana momba ny Fanafoanana ny Endrika Fanavakavahana Rehetra atao amin'ny Vehivavy (CEDAW) izay ahitana an'i Thailandy ho mpikambana ao anatin'izany ny fandrarana nataon'ny Filankevitra Ambony Sangha momba ny fanokanana ny vehivavy. Namoaka didy ihany koa ny NHRC fa manitsakitsaka ny Lalàm-panorenana Thailandey sy ny Fifanarahana Iraisampirenena momba ny Zo Sivily sy Politika (ICCPR), izay samy miaro ny fahalalahana ara-pivavahana avokoa ny fandrarana toy izany.
Nifanehitra tamin'ny fanoherana avy amin'ny laika sy ny moanina izay manohitra ny fanokanana ny vehivavy ny ezaka nataon'i Dhammananda hanangana indray ny fitohizan-taranaka Theravada bhikkhuni any Thailandy, nanambara ny ankamaroan'izy ireo fa tsy mety ny fanokanana ny vehivavy satria efa maty ny fitohizan-taranaka Theravada bhikkhuni. Ilazana ireo vehivavy manoka-tena tanteraka ho an'ny monasitera ny teny hoe ‘Bhikkhuni’. Heverina ho toy ny fomba amam-panao vahiny ny bhikkunis na dia eo aza ny tsy fisian'ny lalàna laika mandrara ny fanokanana vehivavy ary tsy mbola nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny fanokanana vehivavy ho anisan'ny Sangha – vondrom-piarahamonina Bodista ao amin'ny monasitera ny holafitry ny Bodista roa lehibe ao Thailandy.
Reniben'ny Monasitera Songdhammakalyani any Nakhon Pathom izay natsangan'ny reniny Voramai Kabilsingh izay natokana ho moanina tao amin'ny fitohizan-taranaka Dharmaguptaka Taiwaney tamin'ny taona 1971, ka nahazo ny anarana ara-pinoana Ta Tao Fa Tzu, i Dhammananda amin'izao fotoana. Io monasitera io no hany tempoly tokana an'ny vehivavy ao Thailandy. notokanana tao amin'ny Monasitera Songdhammakalyani tamin'ny taona 2002 i Varanggana Vanavichayen, ilay vehivavy voalohany notokanana ho moanina tao amin'ny tany Thailandey.
Na izany aza anefa, tsy neken'ny manampahefana Thailandey ho tempoly Bodista ilay monasitera, ary rehefa nandeha hanome voninahitra ny razan'ny Mpanjaka Bhumibol tao amin'ny Efitra lehibe ao an-Dapan'ny SezamPiandrianana Dusit Maha Prasat, izay nisy ny razana i Dhammananda sy ireo moanina hafa avy ao amin'ilay monasitera dia tsy navela niditra izy ireo. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa nalefa niverina izy ireo satria tsy ara-dalàna ho an'ny vehivavy ny miakanjo saffron eo ambanin'ny lalàna Bodisma Thailandey. Vehivavy moanina sy moanina vaovao mitotaly 22 ihany koa no naverin-dalana rehefa nilazana izy ireo fa tsy mahazo manome voninahitra ny razan'ny Mpanjaka izy ireo raha tsy manala ny akanjony ary manao ny akanjo mainty mahazatra amin'ny olona laika.
Ahitana ireo izay “nahazo lohatenim-baovao na nanana anjara toerana lehibe amin'ireo tantara manan-danja tato anatin'ny 12 volana lasa ny lisitr'ireo vehivavy miisa 100 nosafidian'ny BBC, sy ireo nanana tantara manome aingam-panahy hotantaraina, na nahavita zavatra manan-danja na nitarika ny fiarahamonin'izy ireo tamin'ny fomba izay tsy voatery ho lazaina amin'ny vaovao. “
Ny “Hoavin'ny Vehivavy ” no lohahevitra ho an'ny taona 2019 ary ny lisitra dia ahitana ihany koa eto manaraka ireto: ilay mpikatroka ho an'ny zon'ny vehivavy Koesiana Alanoud Alsharekh, izay nanao ezaka tamin'ny fanafoanana ny lalàna “famonoana olona noho ny fiarovam-boninahitra” ao Koety; Ilay mpilatro Japoney sady mpanoratra Yumi Ishikawa, mpanorina ny hetsika #KuToo manohitra ny fitakiana ny vehivavy hanao kiraro avo voditongotra any am-piasana; Ilay mpiady sumo Hiyori Kon, izay niady ho an'ny fanovana ny fitsipika izay mandrara ny vehivavy tsy hifaninana amin'ny taranja sumo; Alexandria Ocasio-Cortez, ilay kongresy vehivavy Amerikana, izay vehivavy zandriny indrindra nanompo tao amin'ny kongresin'i Etazonia; Ilay mpanao gazety Filipino sady mpisolovavan'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, Maria Ressa, mpitsikera sahisahy momba ny ‘ady amin'ny zava-mahadomelina’ ataon'ny filoha Rodrigo Duterte; ary ilay mpikatroky ny tontolo iainana Soedoa Greta Thunberg, izay nanana ny sekoliny nanao fitokonana ka nanetsika ny tanora an-tapitrisany eran'izao tontolo izao ary niteraka ny fiforonan'ny hetsika ‘Zoman'ny hoavy’.